ခရီးသွားလာရန်မေတ္တာ၌ madly နေသောလူမျိုးတစ်ဦးအမျိုးအစားရှိပါသည်။ သူတို့ဟာအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုလ်သစ်ထောင့်ကြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ တဦးတည်းစစ်မှန်တဲ့ပရဒိသုရှိပါသည်။ ဤသည်ကာတာကိုခေါ်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်အံ့သြဖွယ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ level ...
Chunja ရေပူစမ်း - တက်ကြွမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ထူးခြားသောနေရာတစ်ခု
ကာဇက်စတန်မှာတော့နိုင်ငံတစ်ခရီးစဉ်အတွင်းသွားရောက်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းအံ့သြဖွယ်များနှင့်အမှန်တကယ်ထူးခြားသောနေရာများကိုကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကို။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောရာအရပျသေးငယ်တဲ့ရွာ Chundzha ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကဘာလဲ ...
တောင်ပိုင်းယူကရိန်းအကြားသမတိုက်ကြီးဇုန် (စတက်လွင်ပြင်များနှင့်သစ်တောစတက်လွင်ပြင်ဇုန်) တွင်ဥရောပအရှေ့ပိုင်းစိတျအပိုငျးမှာတော့အနောက်တိုင်းရုရှားနှင့် Crimean ကျွန်းဆွယ်၏မြောက်ဘက်အပိုင်းအိမ်မှာ Azov ပင်လယ်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းခြေ, ဒါမှမဟုတ်အစားက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ...
ဒီနေ့မိုင်ယာမီ၏နေသာမြို့ (FL) ကိုသွားပါ။ ဒါကမြို့အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တစ်ခုလုံးကိုပြည်နယ်, တိုင်းပြည်၏အဓိကအပန်းဖြေစခန်းဧရိယာဆင်ခြင်၏။ အံ့သြဖွယ်သဘောသဘာဝ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကမ်းခြေ, အံ့သြစရာရာသီဥတုနှင့်ကြွယ်ဝသောသမိုင်း, ...
အဆက်မပြတ်လူတွေအများကြီးမော်စကို၏အဓိကမြင်ကွင်းများကိုစူးစမ်းနိုင်ရန်အတွက်မြို့တော်ထံသို့လာကြ၏။ အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌အဖြစ်ယခုနှစ်အခြားမည်သည့်အချိန်တွင်သင်နေဖြင့် Bolshoi ပြဇာတ်ရုံနှင့်အခြားသွားရောက်ကြည့်ရှု, အနီရောင်ရင်ပြင်၏ကျော်ကြား ensemble တွေ့မြင်နိုင်သည် ...
Salou သည် Costa Dorada ၏စပိန်ကမ်းရိုးတန်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ မိသားစုအားလပ်ရက်များနှင့် adrenaline ငတ်မွတ်သောလူငယ်များနှင့်အချစ်ချစ်သူများအတွက်သင့်တော်သည်။ ဆိပ်ကမ်း Aventura ပန်းခြံသည် ...
ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သည်မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအငယ်တန်း Suites အဖြစ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါဟာဘာလဲ? သင်ကဟိုတယ်ခန်း၏အမျိုးအစားများထဲမှဒါခေါ်ကြောင်းသိကြသင့်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏လူကြိုက်များ ...
"ဟုအဆိုပါပင်လယ်၏သဟဇာတ" - ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးလေယာဉ်
Harmony of the Seas သင်္ဘောသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသောသင်္ဘောဖြစ်သည်။ ဤကြီးမားသောအိုအေစစ်အဆင့်သည်အရှည် ၃၆၂.၁၂ မီတာနှင့်အကျယ် ၆၆ မီတာအထိရှိသည်။ အမြင့် ...
မော်စကိုမြေအောက်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အသစ်ကဘူတာနှင့်လိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်း။ ဒါဟာသင်တစ်ခုတည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး network ထဲသို့ကွဲပြားခြားနားသောမြို့သူမြို့သားဒေသများနှင့်၎င်း၏ဆင်ခြေဖုံးပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Metro သင်သည်အလျင်အမြန်မှတဦးတည်းဧရိယာကနေရယူခွင့်ပြု ...
လာမယ့်စွန့်ခွာဖို့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအားလုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ မသင်မနေရခွင့်များအတွက်အဓိကပြဌာန်းချက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အလုပ်သမားရေးရာ Code ကိုပုဒ်မ 114-128 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အနုပညာ။ 122 ပိုင်ခွင့်ကိုအာမခံ ...
Waterpark "Baryonyx": စျေးနှုန်းများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Kazan ရှိ Baryonyx ရေကန်
ကာဇန်၌, သင်တို့ရှိသမျှသည်အရသာနှင့်ဘတ်ဂျက်များအတွက်ဖျော်ဖြေရေးစင်တာများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေမှာသွားကြဖို့ဘယ်မှာ၏မေးခွန်းကိုမှဒေသခံများနီးပါးလူစိမ်း။ ပိုပြီးခက်ခဲအတိအကျရှိရာမြေတပြင်လုံးမိသားစုနှင့်အတူသွားကြဖို့ရွေးချယ်ဖို့။ တစ်ခုမှာ ...
14 စက်တင်ဘာလ 2015 ကတည်းကရုရှားနိုင်ငံသားများတစ်ဦး Schengen ဗီဇာလက်ဗွေနှိပ်ခံရဖို့ရှိသည်။ biometric အချက်အလက်များ၏ပို့ဆောင်မှုအလုံးစုံတို့အဘို့မသင်မနေရဖြစ်ပါတယ်။ fingerprinting လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြည်နယ်များ၏ကောင်စစ်ဝန်ရုံး, လုပ်ပိုင်ခွင့်ဗီဇာစင်တာမှာထွက်ယူသွားတတ်၏ ...
Vityazevo - ထိုနိုဒါကိုဒေသတွင်း၌တည်ရှိသောဖက်ဒရယ်အရေးပါမှုကိုတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်။ Anapa Vityazevo လေဆိပ်မြို့မှာတည်ရှိပြီးတည်နေရာရထားလမ်းဘူတာရုံ Anapa (AEROCOMPLEX အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး) မှငါးကီလိုမီတာရွေးချယ်ခွဲ ထား. နှင့်ထံမှ ...
အရှေ့ဥရောပရိုးရိုး၏အနောက်မြောက်မှာဒဏ္ဍာရီများနှင့်ပါရေကန် Ilmen တည်ရှိသည်။ Novgorod ဒေသတစ်ခုကို Pskov နှင့် Tver ပြည်နယ်နိမိတ်ပေါ်တွင်ယူထားသောနှင့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော၏အနောက်ဘက်အပိုင်းငါးဖမ်းသမားများနှင့် ...
ပြည်သူ့မကြာခဏ, ထိုပင်လယ်ရပ်ခြားခရီးစဉ်စေမယ့်အဘယ်အရာကို multivisa ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားပြည်နယ်၏နယ်မြေထဲဝငျဖို့အကြိမ်အနေနဲ့န့်အသတ်အရေအတွက်က entitles သောဤ entry ကိုပါမစ်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း ...
ရှည်လျားသောလမ်းစွမ်းအင်တွေအများကြီးကြာ, ဒါကြောင့်လူတွေပိုမိုလေကြောင်းလိုင်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုလှည့်နေကြပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုခရီးသည်ကသူ့လေယာဉ်ကိုနှောင့်နှေးသည်အဘယ်မှာရှိအခွအေနနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါလေကြောင်းလိုင်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်များအစားအသောက်နှင့်အတူ client ကိုပေးရမညျ ...
မည်မျှကီလိုမီတာ Rostov ထံမှရိုင်းဖို့၏မေးခွန်းကိုယခုနှစ်ရဲ့အစမှာယူကရိန်းနထောင်လွှားသောနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏နောက်ခံဆန့်ကျင်အထူးအရေးတကြီးဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ Crimean ကျွန်းဆွယ်ရုရှားတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ် ...
ကနေဒါ - မြောက်အမေရိကအတွက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်, အတူတူကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဘာသာစကားများမြင်၏။ ယင်း၏ပိုင်နက်တွင်, တိုင်းပြည်ရုရှားနိုင်ငံပြီးနောက်ဒုတိယအဆင့်။ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာပြဿနာများ၏အရေးတကြီးနှစ်စဉ်ကဒီမှာလာပင်မ ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ ... ဒါကဘာကိုတိုင်းပြည်ဖြစ်သနည်း ဒါကြောင့်အဘယ်မှာတည်ရှိသည်သလဲ?
“ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်? ဒီဟာကဘယ်နိုင်ငံလဲ သူသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ - ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်၏မေးခွန်းများကိုမကြာခဏကြားနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ပထဝီအနေအထားအရစာမတတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူများကိုအလျင်အမြန်အပြစ်ရှာရန်မလိုအပ်ပါ။ သဘောတူ, ထိုကဲ့သို့သောအလွန်သေးငယ်သောပြည်နယ်နိုင် ...
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့်ကျင်းပသောပွဲဖြစ်သည်။ သို့သော်မင်္ဂလာဆောင်သောနေ့သည်မင်္ဂလာဆောင်များအတွက်အထူးဖြစ်သင့်သည်သာမကပထမဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ညလည်းဖြစ်သည်။ အခိုက်အတန့်လေးကို ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,396 စက္ကန့်ကျော် Generate ။